Mpanazatra ny induction heated shrink fitaterana fiara sy milina fanoratana
Home / PWHT Machine / Fantsom-panafahana fampidirana am-baravarana sy fikorisana
Sokajy: PWHT Machine Tags: Induction shrink fitify, Mivembena fitaratra, Mitadiava fihenam-bidy, Mandrosoa fitongilanana, Hikirakira fomba fitetezana, Afangaro ny fihetsika
Ny mpitarika ny Induction Heating System Manufacturer izay manasitrana ao amin'ny Shrink Fitaratra, ny fametrahana fihenam-bidy mihazona ny lanja, ny mpihazona, ny fanamafisana ny tsindrin-drivotra, ny fanamafisana ny hafanana hafanana, ny PWHT.
Ny rafitra fanamafisana ny endriky ny MYDD ho an'ny fihenanam-bato sy ny famolavolana, ny fanamafisana ny fantsom-pifandraisana, ny fanamafisana ny fiatoana ary ny fikarakarana ny fiterahana
Fampidiran-drivotra ny induction
Raha oharina amin'ny fomba fanalefahana sy fampihetseham-panafana mahazatra, ny fiterahana dia manome tombontsoa maro, anisan'izany ny fahasamihafana sy ny kalitaon'ny hafanana, ny fihenam-bidy, ary ny fandaniam-bidy. Ny fanamorana ny induction dia azo antoka, azo antoka ary mora ampiasaina, ary ambony kokoa noho ny teknolojia hafa .amin'ny fahombiazan'ny herinaratra sy ny fahafaha-manao.
Ny endri-tsoratry ny DSP
• Fangatsiahana rivotra: Fametrahana mora apetraka.
• Mpanoratra mari-pana: Manoratra ny fihodinan'ny fanafanana rehetra ary manonta azy
• Coil fampidirana malefaka: Mora ny misintona amin'ny sombin-javatra samihafa.
• Controller ny mari-pana: Ataovy toy ny takiana PWHT ny fizotry ny fanafanana.
• efijery mikasika ny PLC: Mahagaga ny mahita sy mora miasa.
• Herin'ny fanafanana induction: Haingam-pandeha haingam-pandeha sy fahombiazan'ny hafanana, fitsitsiana angovo elektrika
• Hafainganana haingana. Afaka mahatratra 300 degre C ao anatin'ny 10 Min. Mitsitsia fotoana fanamainana
• Mitahiry herinaratra elektrika: afaka mamonjy herinaratra mahery mihoatra ny 50% raha oharina amin'ny fomba fanafana mialoha ny hafanana sy ny fanaintainana
Fampiharana ary ny fampiasana saha fototra
Ny rafitra fanamafisam-peo ny endriky ny endriky ny MYD dia fitaovana fanalefahana amin'ny fanamafisam-peo miaraka amin'ny DSP. Ny fampiharana fototra azy ireo dia ny fanamaintisana ny fantsom-panafihana, ny fanamafisana ny fiara, ny fitsaboana amin'ny hafanana, ny fanamafisana ny alahelo, ny fanasitranana, sns.
Fanamafisam-peo, fametahana lamba
Weld preheating, Post-Weld Healing Treatment, Stress Relief, Refrigeration
Ny orinasa voakasik'izany dia petrolejika, solika sy gas pipelines, aerospace, sambo, steel, boiler, fanatanjahan-tseranana, cylinders, rafitra metaly, rafitra ara-tsimia, tetezan'ny arabe, rano herinaratra, fanorenana, famokarana fiara, hery nokleary, fitrandrahana, fanodinana plastika.
Ny fitaovana fanamainana fanasitranana
1. Herin'ny fanafanana induction
2. coil induction (coil induction clamp) na (coil induction malefaka)
3. Tariby fifandraisana ho an'ny mety hampifandray ny coil sy ny herin'ny fanafanana
4. Fanaraha-maso ny mari-pana
5. efijery mikasika ny PLC
6. Temperature recorder miaraka amin'ny mpanonta
7. K karazana thermocouple sy tariby fifandraisana
8. lamba firakotra
9. Ary ampahany hafa.
1. thermocouple karazana K
3. lamba firakotra insulation
4. Ary toy izany hatrany